Fambolen-kazo am-pahamatorana mba holovain’ny taranaka ary hisy tombontsoa ho anao – Blaogin'i Voniary
Fambolen-kazo am-pahamatorana mba holovain’ny taranaka ary hisy tombontsoa ho anao
Nanatanteraka fambolen-kazo ny Global Voices Malagasy, Namana Serasera Dago ary ny fikambanana Tetezana niaraka tamin’ny mpianatry ny EPP sy ny fokonolona tao Ampanataovana, ny sabotsy 02 Martsa. Fambolen-kazo niavaka satria nasiana fanaovan-tsonia mihitsy mba ho matotra ny fiaraha-mientana. Nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo ihany koa i Voniary. Fotoana nahafinaritra sy nahavelombolo no azo ilàzana azy. Indro ary entina amintsika ny andinindininy.
Ankavia miankavanana : Avy Lavitra (Global Voices Malagasy) , Maeva (
Miss Madagascar France 2018 3ème dauphine) , Anarim (Fikambanana Tetezana)
Ireo tompon’andraikitra ao amin’ny EPP sy ny Fokontany Ampanataovana
Fambolen-kazo matotra ary misy vokany
Teo am-panombohana dia nisy ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana mirakitra ny andraikitry ny ankolafy tsirairay avy. Ny fandaniana rehetra toy ny fitaterana sy ny zana-kazo dia noraisin’i Maeva Rajaonarison, « Miss Madagascar France 2018 3ème dauphine », sy ny reniny Hanitra Rajaonarison an-tànana. Ny Global Voices sy ny Namana Serasera Dago ary ny fikambanana Tetezana kosa dia manolo-tànana amin’ny fambolen-kazo. Manaraka izany, ny fokonolona sy ny mpianatra ary ny tompon’andraikitra ao amin’ny EPP dia mamboly ny hazo ary mikolokolo izany.
Hazo teo amin’ny 400 fototra teo no nambolena. Tao ny hazo fihinam-boa toy ny voasary, voasary makirana, papay sy ny voantsokona (corossol). Tao koa ireo hazo fampiasa ho raokandro toy ny Noni izay manana voany manasitrana aretina toy ny homamiadana , ny diabeta, ny kohaka sy ny maro hafa, ny akasia izay mampijanona haingana ny fivoahan-dra ary tsy adino ny kininina zay ody sery mandaitra tokoa.
Ankavia miankavanana : Ireo ankizy ao amin’ny fikambanana tetezana, ny Namana Serasera Dago, ireo mpianatry ny EPP Ampanataovana
Ny fokonolona tao Ampanataovana
Hisy ny fanaraha-maso sy ny fikolokoloana
Nazavain’i Anarim, avy ao amin’ny fikambanana Tetezana, amin’ny antsipirihany tamin’ireo tompon-tànana ny fikolokoloana ireo hazo : « Ny voasary makirana, rehefa manomboka misy voniny dia rantsanana ary asiana mololo manodidina azy mba hanafaingana ny fiforonan’ny zezika avy amin’ny raviny mihintsana. Rehefa mamony faharoa ilay izy izay vao avela hitombo sy hamoa. » Nambarany ihany koa fa ny antony nanaovan-tsonia ny fifanarahana dia mba ho matotra ny tsirairay indrindra ireo eto an-toerana amin’ny fikolokoloana ny hazo.
Nisedra ny masoandro migaina, ny làlana lavitra ary ny fiakarana mideza ireto mpamboly hazo, nefa samy tsy nisy niverin-dàlana fa tonga teny amin’ny toerana nambolen-kazo teny an-tampon-tendrombohitra ihany. Nametra-panontaniana ihany aho teny an-dàlana teny no sady nananihany hoe « dia ho vitanareo ve ny hijerijery ireto zana-kazo ireto aty lavitra be aty ? » Tsy nisalasala Ra-Jean, anisan’ireo fokonolona nanolo-tànana, namaly : « Vitanay io ka ! ety ange tananay e ! ety foana izahay andavanandro ». Raha ny hita teny an-toerana tokoa dia maro ireo zana-kazo nambolena taloha no efa naniry satria tena manara-maso tokoa ny fokonolona sy ireo tompon’andraikitra.
Ny làlana lavitra
Ny fiakarana mideza
Akasia nambolena roa taona lasa izay
Tombontsoa hafa amin’ny fambolen-kazo
Ho an’ny tandrenivohitra toa ahy dia fanararaotana ny mba isitahana kely ny tanan-dehibe, ny tabatabany, ny rotorotony ary loton-drivony ny fotoana fambolen-kazo toy itony. Efa jenjin’ny setroky ny fiara sy ny orinasa mpanodina ary fofom-pako sy loto loatra ny rivotra eto Antananarivo ka ilaina ny mifoka rivotra madio mba hikolokoloana ny fahasalamana sy hampisokatra ny saina.
Tontolo maitso mavana sy rivotra madio
Fotoana fihaonana amin’ireo havana, namana sy tapaka ary mpiray fikambanana ihany koa ny hetsika fambolen-kazo. Ohatra amin’izany ny Namana Serasera Dago, izay vondron’olona mpisera ao amin’ny serasera.org hatramin’ny ela ka lasa mpinamana taty aoriana. Nararaotin’izy ireo ity hetsika ity mba hihaonana indray ary hanamafisana ny fifankatiavana. Toy izany koa ny Global Voices Malagasy, izay ivondronan’ireo mpisehatra ao amin’ny tranonkala Global voices eto amintsika, izay hoentina amintsika tsy ho ela eto amin’ny blaogy ny mombamomba azy.
ambanivohitra, fambolen-kazo antananarivo, Fampandrosoana lovainjafy, fikajiana tontolo iainana, Global Voices Malagasy, Serasera Malagasy